VOADONAM-PITIAVANA Noboriany ny filahiny fa tsy mety mahazo vehivavy izy
“Samy vita”, hoy ny tenin-jatovo manerana an’Anosikely afak’omaly, tamin’ny fehezan-teny fandrabirabiana filaza amin’ny fora zaza. Raha ny fampitam-baovao azo avy tamin’ny mpiandraikitra
ny seraseran’ny hopitaly HJRA Ampefiloha omaly hariva izay nanamafy ny fanambaran’ny Profesora 0liva Rakoto Alison, talen’ny Hopitaly Joseph Ravoahangy Andrianavalona omaly atoandro dia avotra soamantsara ilay nanapaka tanteraka ny ankasarotany. Araka ny sary hita tamin’ny tambajotran-tserasera izay nohamafisin’ireo mpitsabo dia tapaka hatramin’ny fotony ity fitaovam-pananahana ity.
Afak’omaly maraina no nanesoran’ity rangahy ity izany, teo amin’ny tsenan’i Soamanatombo Anosy. Ny ra nitosaka no nanaitra ny manodidina sy nitondra azy tao amin’ny hopitaly. Nolazainy fa mitoetoe-poana eo aminy io ankasarotany io fa tsy mety mahita vady izy ka notapahany tarangana.
Marihina fa tsy salama saina ity lehilahy ity. Noho io no tsy nahazoany vady sy nananany izao fahasahiana tafahoatra izao. Sarotra avotana matetika ny voa ary anisan’ny faritra saro-pady. Tsy vao izao akory no nisy nanapaka fananahana toy izao teo amin’ny tantara. Efa nisy koa olo-malaza toa an’i Origène
izay nandray ara-bakiteny ny Filazantsara hoe : “ raha ny masonao no manafintohina anao tsy hahazoana ny fanjakan’ny lanitra dia esory izy”.
Haja Nirina sy Pati